लाइभ दोहोरीमा रमाएकी रेजिना - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper लाइभ दोहोरीमा रमाएकी रेजिना	लाइभ दोहोरीमा रमाएकी रेजिना - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper लाइभ दोहोरीमा रमाएकी रेजिना
गायिका रेजिना परियार गायनको यात्रामा लोकप्रिय नाम हो । सांगीतिक यात्रामा औपचारिक रुपमा नै लागेको १९ वर्ष भयो । पहिलोपटक स्टुडियो छिर्दा अनौठो लागेको दिन आजभोलि भने सामान्य बनिसकेको छ । ‘बस्यो दिन बोलीमा’ पहिलोपटक २०५९ सालमा गायक सागर गुरुङसँग काठमाडौं डिजिटलमा रकेर्ड हुँदा मन फुरुङ्ग भएको थियो । अब गायिका बनियो, मनमा छुट्टै अनुभूति भएको थियो उनलाई तर जति जति गीत गाउँदै जाँदा उति उति जटिल रहेछ सांगीतिक क्षेत्र भन्ने महसुस भएको छ गायिका रेजिनालाई ।
गोरखा जिल्लाको बारपाक सुलिकोट–७ गैरीछापमा जन्मिएकी गायिका रेजिना परियारको हालको बसोबास भने तनहुँको चोक चसापानी हो । ६० को दशकमा लोकदोहोरी प्रतियोगितामा धेरै भाग लिँदै आएकी गायिका रेजिनाले दर्जनौं प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायिका, अनुशासित गायिकाको उपमा पाइसकेकी छिन् । उनले जितेका अवार्ड, पुरस्कारले गायन क्षेत्रमा प्रोत्साहन मिलेको हो । गोरखाको भूगोल अनुसारको गाउँले जीवनमा नै रोधी बसेको अनुभव धेरै छ उनीसँग । गाउँमा छँदा रोधीमा गाउने गरिएको गीतसंगीत नै उनको पहिलो सांगीतिक खुड्किलो थियो । त्यसपछि काठमाडौं प्रवेशसँगै प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुँदै आएकी उनले स्टुडियोमा गीत रेकर्डिङको यात्रा पनि सयभन्दा बढीको संख्यामा पुगिसकेको छ । माया जाने दाङ सल्यान, चियाबारीमा, फूल राम्रो फूलकै बासनाले, माया माया भनेर, जोडी ढुकुर, थोरै माया, उनकै शरण, रुवाउँछ तिजले, नहोस् भलो, फाल हान्छु मस्र्याङ्दीमा, पोखरा रोधीघरैमा, कोमल मुटु जलाई, कुर्सी तानातान, रुन्छु धर्केर लगायत सयभन्दा बढी गीतमा उनले स्वर दिएकी छन् ।
पछिल्लोपटक उनी लाइभ दोहोरीमा चर्चामा छिन् । दैनिक ३–४ वटा लाइभ दोहोरी रेकर्ड हुने गर्छन् । जसमा प्रत्यक्ष रुपमा सवाल जवाफ हुने गर्छ । उनका दोहोरी गायनमा प्रस्तुत भएका शब्द संयोजनलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चा मिलेको छ । उनको गायकीलाई तारिफ गर्नेहरु धेरै छन् । अनुशासित, सभ्य पहिरन, मिलनसार, सुमधुर स्वर र सरल शब्द संयोजनमा दोहोरी प्रस्तुत गर्ने उनको बानी छ । त्यही भएर होला पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीमा उनको डिमान्ड हुने गर्छ ।
उनलाई पछिल्लो समय चिनाउने गीत बनेको रुन्छु धर्केर हो । सोही गीतले सांगीतिक यात्राको डेढ दशकपछि पुनः उचाई मिलेको थियो । गायक मौसम गुरुङ र गायिका रेजिना परियारको स्वर रहेको गीतको चर्चा पनि राम्रै मिलेको हो । मुलुकभित्र हुने विभिन्न सांगीतिक मेला महोत्सवमा सांगीतिक प्रस्तुति दिन पनि उनी दौडिरहेकी हुन्छिन् । आजभोलि उनको दिनचर्या भनेको लाइभ दोहोरी, मेला महोत्सव, विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम र दोहोरी साँझको जागिर पनि हो । उनले स्टार इन्टरनेशनल अवार्ड, एनडीडी नेपाल फ्रेन्डसीप इन्टरनेशनल अवार्ड, हिमालयन इन्टरनेशनल नेपाली म्यूजिक अवार्ड जस्ता अवार्डहरुसमेत प्राप्त गरिसकेकी छन् ।
नयाँबसपार्कस्थित सोल्टिनी दोहोरी साँझमा गायिकाको रुपमा सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै आइरहेकी छन् । दोहोरी साँझ एउटा कलाकारको लागि विद्यालय भएको उनी महसुस गर्छिन् । जहाँबाट धेरै कलाकारहरु उत्पादन हुन्छन् । वाद्यवादकहरु उत्पादन हुन्छन् र कलाकारहरुको रोजीरोटी पनि मिलेको हुन्छ । एकातिर आम्दानी र अर्कोतिर दैनिक रुपमा दिइने प्रस्तुतिले कलाकारिताको यात्रालाई सुदृढ बनाइरहेकोले लाइभ दोहोरी गायनलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिने गर्छिन् । गायिका रेजिना पछिल्लो समय नयाँ दोहोरी र तिज गीत रेकर्डिङ गरिरहेकी छन् ।